Xildhibaan Xiddig: Kulankii Kheyre iyo Mursal waxa uu daba socday kulankii Guddoonka Golaha Shacabka – Kalfadhi
Bismillaah: Anigoo ku hadlaya magaca Guddiga Xallinta Khilaaf Bixinta iyo midka Golaha Shacabka,
waxaan bogaadinayaa kulanka horumarka leh ee caawa (xalay) dhex maray Reysal Wasaare Kheyre iyo Guddoomiye Mursal, oo ay hareeraha ka fadhiyeen 2-diisa Kuxigeen.
Kulankan waxaa uu daba socday kulankii wareegii 1-aad ee khilaaf bixinta ee 17-kii bishan Diseembar dhex maray Guddoomiyaha iyo Labadiisa Kuxigeen.
Waxaan Ilaahay ka rajeynayaa in loo gudbo midnimo iyo wadajir, lagana baxo kala aragti duwanaanta
iyo isqab-qabsiga siyaasadeed. Ka guddi ahaan waxaan ku taaganahay dariiqa xidida bixinta mugdiga iyo kala aragti duwanaanta.
Waxaana ku rajo weynahay inaan mar dhaw soo af-meeri doonno, loona gudbi doono midnimo waarta. Waxaa lagama maarmaan ah in kulamadii Golaha Shacabka la dardar-galiyo, si loo sii wado howlihii Golaha hor yaalay.
Xil. Abdirashid Maxamed Xiddig
Guddoomiyaha Guddiga khilaaf Bixinta
Golaha Shacabka, Baarlamaanka